B2B पोडकास्टिंग १०१ | Martech Zone
B2B पोडकास्टिंग १०१
मङ्गलबार, जुन 14, 2011 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
तपाईंले पहिले नै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम छ जुन प्रत्येक शुक्रवार 3PM मा प्रत्यक्ष हुन्छ। प्रयोग गर्दै BlogTalkRadio, त्यो शो त्यसपछि संग्रहीत हुन्छ र पोडकास्टलाई आइट्यून्समा धक्का दिइन्छ। अडियो गुण भन्दा बाहिर, BlogTalkRadio मेरो अपेक्षाहरू पार गर्न जारी छ।
पोडकास्टिंगमा सल्लाहको लागि जब तपाई इन्टरनेटको वरिपरि रम गर्नुहुन्छ, त्यस्तै सफ्टवेयरमा टन्न जानकारी छ धृष्टता GenericName or ग्यारेजब्यान्ड तपाईंको अडियो विकास गर्नका लागि, तपाईंको साइटमा इम्बेड गर्न खेलाडीहरू, खरीद गर्न उपकरणहरू, र त्यसपछि तपाईंलाई दर्ता गरेर iTunes मा प्रत्येक पोडकास्ट अपलोडको माध्यमबाट खस्कनु पर्छ। यो हाम्रो टीमको लागि धेरै धेरै काम हो ... त्यसैले BlogTalkRadio सही समाधान हो।
BlogTalkRadio को साथ, हामीलाई सबै आवश्यक छaराम्रो माइक्रोफोन र स्काइप पाहुनाहरूसँग कनेक्ट हुनका लागि ... तपाईंलाई वास्तवमै त्यस्तो पनि आवश्यक पर्दैन, तपाईं आफ्नो फोनमार्फत डायल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ! BlogTalkRadio एक नयाँ स्विचबोर्ड जारी गर्दैछ, तपाईंलाई सजिलैसँग आफ्नो शो, तपाईंको पाहुनाहरू, र अतिरिक्त अडियो ल्याउनको लागि अनुमति दिँदै। थप रूपमा, BTR ले तपाईंलाई तपाईंको शोलाई फेसबुक र ट्विटरसँग एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ ताकि शो घोषणाहरू स्वचालित रूपमा बाहिर पठाइन्छ। (अद्भुत सुविधा) देखाउनुहोस्।
एक B2B शो को रूप मा, हाम्रो रणनीति उपभोक्ता सम्बन्धित शो भन्दा एकदम फरक छ:
हामी उच्च संख्यामा श्रोताहरू होइनौं ... हामी मार्केटिंग र उद्योग पेशेवरहरूको एक विशेष श्रोताको वृद्धि गर्न चाहन्छौं।
हामी शो मा कनेक्ट हुन मार्केटिंग र टेक्नोलोजी नेताहरूको पीछा गर्दैछौं। बढी श्रोताहरूको लागि शोमा ठूला नामहरू राख्नु यो एक रणनीति मात्र होईन, यो उनीहरूका सर्कलहरूमा हाम्रा नामहरू लगातार उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने रणनीति पनि हो।
हामी मार्केटिंग पेशेवरहरूको खोजी गरिरहेका छौं जुन प्रमुख निगमहरूमा काम गर्छन्। अर्को शब्दहरुमा, हामी शो मा हुन संभावित ग्राहकहरु लाई लक्षित गर्दै छौं! यो sinister लाग्न सक्छ, तर यो बिल्कुल काम गर्दछ। हामी कार्यक्रममा मार्केट नेताहरू र फर्च्युन 500०० कम्पनीहरू ल्याउन जारी छौं। ती दुबै श्रोताहरूले मूल्यवान् पाउनेछन् र हामीलाई उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने प्रस्ताव गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्।
पोडकास्टि easy गर्न सजिलो छैन, धेरै लेखक, ब्लगर, र उद्योग नेताहरू एक कार्यक्रम मा हुन को अवसर मा उफ्रिन्छ। त्यहाँ त्यहाँ जति धेरै पोडकास्टहरू छैनन् त्यहाँ ब्लगहरू छन्… त्यसैले सुन्नको मौका धेरै उच्च छ। यो शो मा प्राप्त गर्न को लागी आफ्नो सबै भन्दा राम्रो चासो (र तपाइँको) मा छ।
त्योले भन्यो ... हामी शोमा कसैलाई उनीहरूको कडा बेच्न तान्दैनौं। हामी उनीहरूलाई आफ्नो, उनीहरूको कम्पनी र उनीहरूको रणनीति प्रमोट गर्न दर्शकहरू प्रदान गर्छौं, साथ साथै यसका बारे केही सल्लाह वा कुराकानी प्रस्ताव गर्दछौं। यदि अतिथिले हाम्रो प्रतिक्रियाको कदर गर्दछ भने, त्यहाँ अफलाइन सम्बन्ध जारी राख्न सधैं अवसर हुन्छ।
हामी पोडकास्टका लागि लक्ष्यहरू द्वारा पहिचान गर्दछौं:
हाम्रो ब्लगमा सम्पर्क फारम प्रदान गर्दै। जनसम्पर्क पेशेवरहरूले हामीलाई पिचहरू मार्फत दैनिक सम्पर्क गर्छन् - तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रमको लागि उत्कृष्ट अवसरहरू हुन्।
मार्फत ब्लगरहरू खोज्नुहोस् ब्लग खोजीहरू, पोष्टरank्क र टेक्नोराटी त्यो उही विषयहरूमा बोल्दछ।
जस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा पोडकास्टरहरू फेला पार्नुहोस् iTunes र Stitcher.
हामीले बोकेका शीर्षकहरूमा नयाँ रिलिज भएका पुस्तकहरूमा लेखकहरू फेला पार्नुहोस्। लेखकहरू उनीहरूको पुस्तकहरूमा शब्द निकाल्ने प्रयास गर्दै छन् र पोडकास्टहरूले एक ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ। अधिकांश लेखकहरू यस अवसरमा हाम फाल्ने छन्। तिनीहरूको साइट खोज्नुहोस् र तिनीहरूसँग जडान गर्नुहोस्।
द्वारा शो प्रचार गर्नुहोस् तपाईंको ब्लगमा रेडियो कार्यक्रम एकीकृत गर्दै र सामाजिक पृष्ठहरु। पोडकास्टहरू दुबै काम र सुन्नको लागि व्यक्तिहरूको लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्छन् ... केहि ब्लगले प्रस्ताव गर्दैन। सुन्दै पढ्नबाट पनि ठुलो चरण हो ... जब तपाईंले आवाजको स्वरहरू सुन्नुहुन्छ। यसले तपाईंको श्रोताहरूलाई तपाईंको साथ विश्वास छिटो बनाउँन मद्दत गर्दछ।
जुन 15, 2011 बिहान 9:35 बजे
तपाइँको कार्यक्रम लाई माया गर्नुहोस्, यसलाई सधैं प्रत्यक्ष समात्न सक्नुहुन्न, त्यसैले पोडकास्टहरू डाउनलोड गर्न र मसँग समय हुँदा सुन्नु रमाइलो छ।
मैले केही समयको लागि ह्यान्ड होल्ड रेकर्डर र अडासिटी प्रयोग गरेर पोडकास्ट गर्दै थिएँ, तर BlogTalk रेडियो धेरै सजिलो छ। मैले यसलाई iTunes मा अपलोड गर्नु अघि म अझै पनि अन्तिम कार्यक्रम सम्पादन गर्छु र मैले हाम्रा प्रस्तावहरूमा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको लिङ्क समावेश गर्न थालेको छु।
हामी बुधवारको 10:30 मा हाम्रो सानो व्यापार कार्यक्रमको लागि दर्शकहरू निर्माण गर्ने प्रयास गर्दा हामी तपाईंबाट सिक्न जाँदैछौं।